रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, प्रहरीको डण्डाबाट पेलिएका मेरा करङ हिजोभन्दा आज दुखाई बढी छ - Sankalpa Khabar
1. विधानसम्मत् गठित संखुवासभा-अमेरिका जनसम्पर्क समितिलाई किन तानियो विवादमा ?
2. कांग्रेसले भन्यो, ओली कदमविरुद्ध सर्वसम्मत निर्णयका साथ आन्दोलनमा
3. मन्त्रिपरिषद् बैठकमा के–के भए निर्णय (हेर्नुस् सूचिसहित)
4. बझाङमा तरुण दलका कार्यकर्ता सिंहको हत्या गर्नेलाई कारबाही गर्न कांग्रेसको माग
5. सेनाका डा.भुवनराज कुँवरले लगाए कोरोनाविरुद्धको पहिलो खोप
6. वामदेव गौतमको तेस्रो पार्टी जन्माउने प्रयास, आएनन् ओली र प्रचण्ड
रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, प्रहरीको डण्डाबाट पेलिएका मेरा करङ हिजोभन्दा आज दुखाई बढी छ
१८ मंसिर ०९:०५
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रहरीको डण्डाबाट पेलान भएको आफ्नो करङ हिजोभन्दा आज झन् बढी दुःखेको बताएका छन् । हिजो दिउँसोभन्दा साँझ बढी दुःखेको र आज दुःखाईको मात्रा बढेको नेता पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
केही समयअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत दमौलीमा रहेका पौडेलले प्रहरी यातनाबारे मुख खोलेका हुन् । उनले सात दशकको अथक प्रयासबाट प्राप्त गणतन्त्रमा प्रहरीको पेलानबाट छुटकारा मिल्न नसकेको गुनासोसमेत गरेका छन् । उनले प्रहरीको ज्यादती बढेको भन्दै असली लोकतन्त्रको साकार कहिले हुने हो ? भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
‘पुलिसको डण्डाबाट पेलिएका मेरा करङ दिउँसोभन्दा साँझ दुखेर आयो, हिजोभन्दा आज दुखार्इ बढी छ । सात दशकको अथक प्रयासबाट प्राप्त गणतन्त्रमा पनि पुलिस पेलानबाट छुटकारा मिल्न सकेको छैन । असली लोकतन्त्र कहिले साकार हुने हो ? मेरो चिन्ता यसैमा छ,’ पौडेलले लेखेका छन् ।
१४ माघ ११:२६
सर्लाहीमा पेस्तोलसहित एक पक्राउ
११ माघ ०८:२०
निर्वाचन आयोगले नेकपामा किन देखेन विभाजन, अब के हुन्छ…
१२ माघ ११:३८
थप २ सय ८३ मा संक्रमण पुष्टि, ३ जनाको…
१४ माघ १७:०७
‘संकटमा एनआरएनएको भूमिका प्रशंसायोग्य’
१० माघ १५:३४
१२ माघ १६:१९
अख्तियारमा धुलोले छोपेका फाइल खुल्दै भन्ने मन्त्रीज्ञवालीको अभिव्यक्तिले सेटिङमै…
तीन महिनामा सबै नेपालीलाई कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन कति…
१५ माघ ०९:४८
सूर्य थापाको कटाक्ष, भैँसीको पूजा गर्ने प्रचण्डसँग पशुपतिमा पूजा…
१५ माघ ०९:३६
प्रचण्डले गरेको भैंसी पूजालाइ ओलीले पशुपतिमा पूजा गर्नुजस्तो स्वभाविक…
१५ माघ ०८:५३
काेराेना असरः देशभरका ४० प्रतिशत इँटा उद्योग बन्द
१५ माघ ०८:१५
किन गए सरकारका सचिव गङ्गामायाको स्वास्थ्य बुझ्न ?
१५ माघ ०८:०३
१५ माघ ०७:३३
बुधबार नौ हजारले लगाए खोप
१५ माघ ०७:२८